Android လုလင်: October 2012
Huawei c8600 အတွက်ပါ
Huwei c8600 ကို Android 2.1 ကနေ 2.2 သို့ပြောင်းပေးတဲ့ firmware လေးပါ။
ယုံယုံကြည်ကြည်သုံးနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ထားပါတယ်။
Link ကနေ download လုပ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ ရလာတဲ့ zip file ကို extract လုပ်ပါ။
ပြီးရင် dload ဆိုတဲ့ file ရလိမ့်မည်။ အဲဒါကို ဖုန်းရဲ့ memory card ထဲသွင်းပြီးသွားရင် ဖုန်းကိုပိတ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် phone power key + volume up key+ end key(red key ) ကို upgrading ပြီးဆုံးတဲ့ အချိန်ထိ မလွှတ်ဘဲဖိထားပါ။
upgrade complete ဆိုတဲ့ စာသားပေါ်လာရင် လွှတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းပွင့်လာပါလိမ့်မည်။
ရေးတဲ့အချိန် 1:06 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဖုန်းတစ်လုံး၏ အဓိက တည်နေရာကို အခြားဖုန်းတစ်လုံး သို့မဟုတ် ဖုန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကွန်ပျူတာမှ တစ်ဆင့် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှု ရှိပါက တည်နေရာကို ခြေရာခံ ဖော်ပြပေးနိုင်မည့် Gothere Myanmar Software လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်..။ အဆိုပါ Software ကို Android ဖုန်းများတွင် ထည့်သွင်းနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ဖုန်းပျောက်သော အချိန်တွင် ရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ မိဘများအနေဖြင့် မိမိကလေး ရောက်ရှိနေသည့် နေရာကို သိရှိနိုင်ခြင်း စသည်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
“ဒီ software ကနေ အခြားဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ တည်နေရာကို သိချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်သိချင်တဲ့ ဖုန်းပိုင်ရှင်ဆီကို message လှမ်းပို့ရပါမယ်။ တည်နေရာကို သိချင်တယ်။ လက်ခံမလား စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဟိုဘက်ဖုန်းက လက်ခံတဲ့ message ပြန်လာပြီဆိုရင် ဒီဖုန်းနှစ်လုံးကြားထဲမှာ software က အလုပ်လုပ်ပြီး သိချင်တဲ့ ဖုန်းရဲ့ တည်နေရာကို အမြဲပြပေးသွားမှာပါ။ ဒါ့အပြင် realtime mobile movement tracking လည်း လုပ်လို့ရတဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ ကားအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး သွားလာတာ၊ Marketing Staff များ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတွေမှာ မရှိတာတွေကိုပါ ချက်ချင်း သိရှိနိုင်ပါတယ်” ဟု အဆိုပါ software ကို ရေးသားသော Giga Gates Co.,Ltd မှ project manager တစ်ဦးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် အဆိုပါ Software ထည့်သွင်းထားပါက မိမိရောက်နေသော နေရာသို့ လာရောက်ရန် လမ်းမသိသော မိတ်ဆွေထံသို့ Location Sharing ပြုလုပ်၍ ဖုန်းမှတစ်ဆင့် လမ်းပြပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး GPS Tracking မှာ သွားးခဲ့သည့် နေရာများကို ပြန်လည် ကြည့်ရှုနိုင်သဖြင့် ကားများတွင် တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်သမားများကို အပြင်လွှတ်ပြီးသည့်အခါ ပြန်လည် ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
မြေပုံပေါ်တွင်လည်း မြို့၊ လုပ်ငန်း၊ အဆောက်အဦများကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပြီး Map Info ခြောက်သောင်းကျော်ခန့် သွင်းထားကြောင်း သိရသည်။ မိမိ ရောက်ရှိနေသည့် နေရာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မသိပါကလည်း ရောက်ရှိရာ နေရာအနီးရှိ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်များကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ အသုံးပြုရန်အတွက် GPS ဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် Internet Connection ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သော်လည်း Battery Saving, Cost Saving ဖြစ်စေရန် Assistant Location Sensing (ALS) စနစ်ကို ထည့်သွင်းပေးထားကြောင်း သိရသည်။ ယခု ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော feature များအပြင် အသုံးပြုသူများအတွက် အဆင်ပြေမည့် feature များကိုပါ ထပ်မံ ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
Download link >> http://go-there-myanmar.com/download/GOthere-Myanmar-All-In-One.apk
ရေးတဲ့အချိန် 12:13 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android အသုံးပြုသူများအတွက် skyfire 4.0 Browser
Android အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ flash video တွေပါတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကို ကြည့်ရှုတဲ့အခါ
၄င်းတို့ကို အပြည့်အ၀ခံစားရမည်မဟုတ်ပဲ Flash Player plugin
လိုအပ်နေလို့ပါပဲ.. ဒိအတွက် Skyfire က Flash-enabled browser တစ်ခုကို
ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ flash video ပါတဲ့ အင်တာနက်နဲ့ web page များကို
မည်သည့် plugin မှ ထည့်သွင်းစရာမလိုပဲ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ web page များကို ဖော်ပြပေးနိုင်ရုံမကပဲ Multi-tabs
browsing ပါ သုံးလို့ရတဲ့အတွက် အသုံးပြုသူများကို ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာ Android များသာမက Symbian နဲ့ Windows Mobile တွေအတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Nokia Ovi Store and Windows ဈေးကွက်မှာ Top 10
တိုက်ရိုက်လင့်ပေးချင်ပေမယ့် ရှာမရတဲ့အတွက် google play ကပဲ ဆွဲလိုက်ကြတော့ဗျာ
ရေးတဲ့အချိန် 12:11 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
simsimi နဲ့ အပျင်းပြေစကားပြောမယ်။
ဖုန်းတွေမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ simsimi ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ အင်တာနက်ချိတ်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်။ ကိုက တစ်ခုခုပြောလိုက်ရင် သူကလည်းပြန်ပြောပါလိမ့်မယ်။ အပျင်းပြေပါတယ် သူနဲ့ပြောရတာ။ ဟုတ်တာရော မဟုတ်တာရော အကုန်လျှောက်ဖြေပါတယ်သူက။
ရေးတဲ့အချိန် 12:03 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Download HTC Font (china font Modify) >>>>
http://www.myanmarmobileapp.com/?p=15801 မှာ HTC ဖုန်းများ Bootloader Unlock လုပ်နည်းနဲ. Unlock လုပ်ပါ။
၂။ http://forum.myanmarmobileapp.com/index.php?topic=80.0 မှာ HTC ဖုန်းများ ClockWorkMod သွင်းနည်းနဲ. ClockWorkMod သွင်းပါ။
၄။ Bootloader ကနေ Recovery မှ ClockWorkmod သို.၀င်ပါ။
မြန်မာမိုဘိုင်း app မှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ် ခင်ဗျာ။
ရေးတဲ့အချိန် 11:07 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Wifi Zone မှfacebook များကို android phone နှင့်ဟက်နည်း (or) သတိထားစရာ
သူများတွေကိုဒုက္ခမပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ software ကို ဒီမှာ ရယူပါ
Software down ပြီးဖုန်းမှာ run ပြီး scan ဖတ်လိုက်ရင်ပုံထဲကအတိုငိးကိုယ်နဲ့ wifi network တစ်ခု ထဲမှာသုံးနေတဲ့ အကောင့်တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ပုံထဲကစာအစိမ်းလေးတွေနဲ့ပေါ်နေတဲ့ facebook တွေဆိုဝင်လို့ရပါတယ်။
အစိမ်းရောင်နဲ့ပေါ်နေတဲ့အကောင့်တစ်ခုကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့အောက်ပါအတိုင်း menu ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီmenu ပေါ်လာရင်အောက်ဆုံးက open mobile site
အောက်ကပုံကတော့ကကျွန်တော် open mobile site ကိုနှိပ်လိုက်လို့သူများ အကောင့်ထဲရောက်သွားတဲ့ပုံပါ။သူများအကောင့်ထဲရောက်သွားပြီဆိုတော့
ဒီလိုလေးတွေ လုပ်တတ်ကျတယ်ဆိုတာ သိစေချင်လို့ လုလင်ပျိုက ပြန် share ပေးတာပါ
လုလင်ပျို တစ်ခုမေးပါမယ် သူများ facebook အကောင့်ဟတ်တော့ ရော မိတ်ဆွေတို့ ဘာလုပ်လို့ရပါသလဲ
ရေးတဲ့အချိန် 11:05 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
အကြောင်းအရာ သိမှတ်စရာ, ဆော့ဝဲ ။လုပ်ဆောင်ချက်
Android ဖုန်းတွေအတွက် Ebooks Reader လေးများ
စာအုပ်တွေကို ချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့သူတွေအတွက် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေကို အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုလို့ရအောင် ကျွန်တော်သိတဲ့ Ebooks Reader apps လေးတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး reader လေးတွေဖြစ်ပါတယ် ။
1.1000+ Free Ebooks Reader
သူ့ကိုအကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ သူ့ကိုထွင်တဲ့ဆိုဒ်က www.eprint-studio.com ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ ကို စာအုပ် ၁၀ အုပ် ကျော်ကျော်တင်ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Harry Potter ( 1-7 ), Twilight Saga Series,The Chronicles of Narnia7in 1 အစရှိတဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ စာအုပ်တွေ Series လိုက်ကို Free Download ဆွဲပြီးဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ စာရေးဆရာ StephenKing ရဲ့စာအုပ်ပေါင်းတော်တော်များများ ကို တွေ့ရပါတယ်။ Category ပေါင်း (၁၃) ခုက စာအုပ်တွေကို ရယူနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံး Biography ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍမှာ Walter Isaacson ရေးတဲ့ Steve Jobs ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုတောင် Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
http://www.1mobile.com/10000-free-ebooks-reader-348888.html မှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
သူကတော့ Ebook တွေ download လုပ်လို့ရနိုင်မယ့် ဆိုဒ်လေးတွေကို စုစည်းပေးထားတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဒ်ပေါင်း ၂၂ ဆိုဒ် ပါဝင်ပါတယ်။ဆိုဒ်တစ်ခုခြင်းဆီကို Browser တွေနဲ့ လိုက်ရှာနေမယ့် အစား ဒီ apps ကို သုံးပြီးတော့ ဆိုဒ်ပေါင်း ၂၂ ဆိုဒ်က စာအုပ်တွေကို အားရပါးရ Download ပြုလုပ်နိုင်ကြပါ တယ်။(download ဆွဲခါနီးမှသာ Browser ကိုသုံးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
http://www.1mobile.com/free-ebooks-343618.html မှာ download ရယူနိုင်ပါတယ် ။
Reader တစ်ခုလို အသုံးပြုနိုင်သလို manybooks.com နဲ့ feedbook.com က စာအုပ်တွေကို free download ဆွဲယူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ။ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ စာအုပ်ဖိုင် အမျိုးအစားက epub file အမျိုးအစား တွေ ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ Display ကလည်း စင်ပေါ်မှာ စာအုပ်လေးတွေ စီထားသလို မြင်တွေ့ရမှာပါပဲ။
http://www.1mobile.com/go-book-88382.html မှာ download ရယူနိုင်ပါတယ် ။
သူကလည်း Go Book နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ ။ feedbook.com က စာအုပ်တွေကို free download ဆွဲယူ ဖတ်ရှုနိုင်သလို ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ စာအုပ်ဖိုင်အမျိုးအစားကလည်း epub file အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပါ တယ်။ဒါပေမဲ့ စာအုပ် download ဆွဲတဲ့ store ကိုရောက်ဖို့ နည်းနည်းကြာပါတယ်။ အခကြေးငွေနဲ့ လည်း စာအုပ်တွေကို ၀ယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။(ကျွန်တော်ကတော့ free ebooks တွေကိုပဲ download ဆွဲနိုင်ပါသေးတယ်။)
http://www.1mobile.com/aldiko-book-reader-61225.html ကနေ download ရယူနိုင်ပါတယ် ။
စာအုပ် file လေးဖြစ်ပါတယ်။ စာမျက်နှာပေါင်း ၁၀၀၀ ပါဝင်ပါတယ်။အားလုံးက အချက် အလက်တွေပါပဲ။ အကြောင်းအရာပေါင်းစုံနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်မျိုးစုံကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Internet connection မလိုအပ်ပါဘူး။ Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။စာမျက်နှာ ၅ မှာ ဒီလိုမျိုးရေးထားပါတယ်။
A volcano has enough power to shoot ash as high as 50 km into the atmosphere .
http://www.1mobile.com/1000-amusing-facts.-365522.html မှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Category တွေ များစွာက ဟာသတွေကို အားရပါးရ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Internet connection မလိုအပ်ပါဘူး။ Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကြိုက်တဲ့ ဟာသတွေကို favourite ထဲ ထည့်ပြီး နောက်ထပ် ထပ်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး ဟာသတွေကို Bluetooth , Gmail တို့နဲ့ share လုပ်နိုင်ပါသေးတယ် ။
http://www.1mobile.com/20000-awesome-jokes-136506.html မှာ download ရယူနိုင်ပါတယ် ။
7.Funny Fact Free
ဒီ apps လေးက ကျော်ကြားတဲ့ အဆိုအမိန့်တွေ ၊ ဟာသတိုလေးတွေ ၊ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းတွေကို စုစည်းပေးထားတာပါ။ Internet connection မလိုအပ်ပါဘူး။ Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Category ၁၃ ခုရှိပြီး အချက်အလက်ပေါင်း ၈၃၇၀ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်နောက်ဆုံး ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာမျက်နှာ ကို မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကြိုက်မိတဲ့ ဟာသလေး တစ်ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
What' s the difference betweenalawyer andavampier ?
- A vampire only sucks blood at night.
http://www.1mobile.com/funny-facts-free-8000-88766.html မှာ download ရယူနိုင်ပါတယ်။
သူကတော့ reader သက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ရဲ့ SD Card ထဲက PDF file အမျိုးအစား စာအုပ်တွေကို ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ Display ကတော့ စင်ပေါ်မှာ စာအုပ်လေး တွေ တင်ထားသလိုမြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
http://www.1mobile.com/ebookdroid-196200.html မှာ download ရယူနိုင်ပါတယ်။
သူက Reader သက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ PDF file အမျိုးအစား စာအုပ်ဖိုင်တွေကို အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ။နောက်ဆုံးကိုယ် ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာမျက်နှာကို မှတ်ထားပေးနိုင်ပါတယ် ။
http://www.1mobile.com/ezpdf-reader-cloud-plugin-346272.html မှာ download ရယူနိုင် ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 11:01 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
zawgyi font for andriod touchscreen
zawgyi font ကို andriod os မှာသုံးလို့ရပါပြီ ဒါပေမယ့် မသိသေးသူတွေအတွက်ပြောပြချင်လို့ပါ လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့် ဖုန်းပေါ်မူတည်ပြီးနည်းနည်းတော့်ကွဲပြားမှာပါ ဒါပေမယ့်လည်း ပုံစံတွေကတော့်တူတူပါဘဲ အရင်ဆုံးအောက်ကဖိုင်နှစ်ဖိုင်လုံးဒေါင်းပေးပါ zip ဖိုင်အနေနဲ့ရလာမှာပါ ပြီးရင်တော့် extract လုပ်ပေးပါ ဒါဆိုရင်တော့်
.apk အနေနဲ့ရလာမှာပါ ရလာတဲ့ဖိုင်နှစ်ဖိုင်လုံးကို run ပေးပါပြီးရင်တော့် setting နည်းနည်းပြောင်းပေးရမှာပါ (လုပ်ပုံလုပ်နည်း နဲနဲတော့်ကွဲပြားပေမယ့်စမ်းကြည့်ပါ အဆင်မပြေရင်ပြန်ပြောပါသဘောတရားကတော့်တူတူပါဘဲ) အရင်ဆုံး zawgyi font တွေကိုမြင်ရဖို့အတွက် setting စပြောင်းပေးပါ့မယ် (for samsung galaxy andriod os) setting>screen display>font style>zawgyi one ttf ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ် ဒါဆိုရင် restart တောင်းပါမယ် ချပေးလိုက်ပါ မလုပ်ပေးဘူးဆိုရင် zawgyi font ကိုတွေ့ရအုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး.....
restart ချပြီးရင်တော့် စာတွေကိုစဖတ်လို့ရပါပြီ ဒါပေမယ့် ရိုက်လို့တော့်ရအုံးမှာမဟုတ်ဘူး လက်ကွက်တွေအတွက်ကတော့် setting>locate and text>အောက်ဆုံးနားက myandriod soft keyboard ကို check လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ် ပြီးရင်တော့် message ဘဲဖြစ်ဖြစ်သွားလိုက်မယ်ဗျာ tap to compose မှာ long press ဖိထားပေးပါ ဒါဆိုရင် input language ကိုတွေ့ရပါမယ် အဲဒါကိုရွေးလိုက်ပါ ပေါ်လာတဲ့အထဲက myandriod soft keyboard ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုရင် မြန်မာလက်ကွက်တွေကိုတွေ့ရပါမယ် ကျန်တာတွေကိုတော့် နည်းနည်းကလိကြည့်လိုက်တော့်ပေါ့နော် :)
credit _ myanmartutorial
ရေးတဲ့အချိန် 10:58 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ရေးတဲ့အချိန် 10:55 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android Live Wallpaper (ပိုးစုန်းကြူး)
ကျေးရွာလေးရဲ့ညပိုင်းမှာ ပိုးစုန်းကြူးလေးတွေ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်သွားနေတဲ့ Live Wallpaper သုံးခုပါ...။
ရေးတဲ့အချိန် 10:53 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
မြန်မာ Mobile Zawgyi Changer(Beta) for Android
ရေးတဲ့အချိန် 10:50 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ငတက်ပြား v1.0 (မြန်မာပြည်ဂိမ်း) for Android
စင်ကာပူအခြေစုိုက် Rival Edge Pte Ltd မှမြန်မာကွန်ပျူတာပညာရှင်များကရေးသားထုတ်လုပ်လုိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Game Developer Team - Rival Edge Pte Ltd
Android ဖုန်းများတွင်ကစားနုိုင်မည့် မိုဘုိုင်းဂိမ်းတစ်ခုပါ ... ။
ဂိမ်းပုံစံကတော့ Temple Run ဂိမ်းလုိုပဲ ငတက်ပြားက အချိန်ပြည့်ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေတဲ့
ရရှိအောင်ဆော့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းရဲ့နောက်ခံတီးလုံးကုို မြန်မာ့ရုိုးရာတီးလုံးနဲ့ ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဆော့လုို့ကောင်းတဲ့ မြန်မာ
ငတက်ပြား Download Hear !!!! (ဒေါင်းလော့လင့်အသစ်နဲ့ ပြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်)
ရေးတဲ့အချိန် 10:47 AM3comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android ဖုန်းထဲကနေ ဘောပွဲGoal Scores တွေ ကြည့်မယ်..
သူငယ်ချင်းများ အားလုံး မင်္ဂလာပါ
ကဲ... ဒါကတော့ ... ကျွန်တော့်လိုမျိုး ဘောလုံးဝါသနာအိုးတွေ အတွက်ပေါ့...
မနက်မနက် ဘောလုံးရလာဒ် စောင့်ကြည့်ရတဲ့ ဘ၀က လွတ်ချင်ရင်တော့.. ဒါလေးကို သွင်းထားလိုက်ပေါ့....
လက်ရှိ ကန်နေတဲ့ပွဲတွေ...ကန်ပြီးတဲ့ပွဲတွေ...ကိုလည်း ကြည့်လို့ရသလို....နိုင်ငံအလိုက် ပွဲစဉ်တွေကိုလည်း ရှာဖွေလို့ရပါတယ်...
ဂိုးသွင်းသူတို့...အ၀ါကဒ်..အနီကဒ်တွေဘာ ပြပေးတော့.. တစ်ကယ့်ကို ပြီးပြည့်စုံတာပေါ့ဗျာ....
ဖုန်းကိုတော့ အင်တာနက် ချိတ်ထားဖို့ လိုတယ်နော်....
လိုချင်ရင်တော့ >>> ဒီမှာDownloadလုပ် ပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 10:44 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Huawei Mobile PC Suite လေးဘယ်လိုသုံးမလဲ ????
တစ်ရက်တုန်းက ကျွန်တော် Huawei U8818 အတွက် ROM လေးတွေ Huawei official site မှာရှာနေတုန်း Huawei PC suite လေးတစ်ခုတွေ့ ပါတယ်။
အဲဒီ PC suite လေးနာမည်က Hisuite တဲ့၊ တော်တော်မိုက်တယ်ဗျာ။
Nokia PC suite နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။
ဒါပေမဲ့သူက phone ကို computer နဲ့ ချိတ်ထားပြီးရင် ဖုန်းမှာလုပ်နေတာအားလုံးကို screen shot လုပ်လို့ ရပါတယ်။
အရင်က ဖုန်းကို screen shot လုပ်ဖို့ ကျွန်တော်လည်းတော်တော်မွှေနှောက်ရှာဖွေခဲ့ပေမယ့်လည်းအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။
ဒါကတော့ ဖုန်းကနေမြင်ရမယ့်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်....ဖုန်းမှာပါ သူ့ ရဲ့ suite ကိုပါ install လုပ်သွားပါတယ်။
message တွေကိုသိမ်းလို့ ရသလိုဖုန်းထဲက data အားလုံး( သီချင်းတွေ၊ photo တွေနဲ့ အခြားအားလုံး) ကို export အလွယ်တကူထုတ်ယူလို့ ရသလို computer ထဲက Hisuite ထဲကနေပဲ Apps လေးတွေကို install လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ပြီးတော့ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ version နဲ့ Hisuite ရဲ့ version ကို online ရှိရင် update check လည်းလုပ်ပေးတဲ့အတွက်အဆင်ပြေစေပါတယ်။ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့အတွက်တင်ပေးလိုက်တာပါ။
software လိုချင်သူများ ဒီမှာ ဒေါင်းပါခင်ဗျာ။ Huawei နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြားသော Official ROM များကိုလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။
Huawei Phone တွေအားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေမှာပါ။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်..ခင်ဗျာ။
ရေးတဲ့အချိန် 10:43 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
အရှေ့ကတင်ထားတဲ့spermdefensegameကdownလို့ မရလို့ ကျွန်တော် link အသစ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အသစ်ထွက် ဂိမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ်..
ဆော့ရတာကတော့ မိမိကိုယ်ထဲ ၀င်ရောက်လာတဲ့
ပိုးမွှားတွေကို တားဆီး နှိမ်နှင်းရမဲ့ ဂိမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်..
Level တွေ တက်လာလေလေ ပိုခက်လေလေပါပဲ
ဆော့လို့ ကောင်းတယ်ဆိုရင် Like ပေးခဲ့ပါ
Sperm Defense 1.5′s Screenshots
http://f.1mobile.com/mobile_soft ... spermdefense_17.apk
ရေးတဲ့အချိန် 3:47 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Sperm Defense (apk game)
ကိုယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ Virus တွေကိုနှိမ်နှင်းရတဲ့ Game လေးပါ။ ဆော့လို့အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 3:14 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Super User များအတွက် Magic Piano with all songs
ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ. အခုမှ ရေးဖြစ်တာပါ
music ကို ကြိုက်တဲ. ကိုကို မမ များအတွက်ရော၊ နောက်ပြီး ကလေးလေးက အစ ဖိုးဖိုး အဆုံး အကုန်ကြိုက်မယ် လို. ယူဆပါတယ်
ဆက်ပြီးတော လေ ပေါ ခွင့်ပြုပါ ခင်ဗျာ
သုတေသန ပြုသူများ၏ အဆိုအရ သင့် အသက်ကို ရှည် ချင်ရင်
စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော.ချနိုင်ရပါမယ် တဲ. ခင်ဗျာ
စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချနိုင်မယ် နည်းတွေထဲမှာ Music ဂီတ ကတော. ထိပ်ဆုံးကပေါ့နော.
ဒီတော. သင့် အသက်ကို ရှည်စေဖို. Music ကို ဘယ်လို အသုံးချမလဲ
နောက်ပြီး ဒီ Magic Piano က ရော ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ အသုံးဝင်မလဲဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ကြည်.ပါ
Music အသုံးချတဲ. နည်းတွေထဲက တစ်ခုကတော. Music Instruments များကို ကိုယ်တိုင်တီးခတ်ခြင်း ပါပဲဗျာ
ကျွန်တော်က ဘာ instruments မှ မတီးတတ်တော. ဘယ်လိုလုပ် ပြီး ဒီနည်းကို အသုံးချမလဲ လို. မေးလာလို.ရှိရင်
Phone , computer ထဲက Music game တစ်ခုခု ကို play မှာပေါ့နော.
ကဲ အခုလောလောဆယ် သင့်လက် ထဲမှာ root လုပ်ပြီးသာ android ဖုန်းပဲ ရှိတယ် ဆိုရင် ပဲ တော်တော် အလုပ်ဖြစ်ပါပြီဗျာ
ဘော်ဘော် တို.ကတော. Guitar Hero နဲ. စိမ်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး နော.
ဒီMagic piano ကလည်း ဒီသဘော ပါပဲ
point လေးတွေကို လိုက်ထောက်ပြီးတော. ဆော.ရတာပါ
ဒီလို ဆော.ရတာ piano ကို တကယ် တီးနေရ သလိုပဲ ခံစားရပါတယ် (ကျွန်တော်. အတွက်)
ဟိုး အရင် ကတော. I Phone Game ပါ
အခု Android အတွက့်ပေါ့နော.
ပြီတော. New York Time နဲ. Time magazine ကြီးတွေက တော. သင့်ကို pianist တစ်ယောက်လို ခံစားစေရတယ် ဆိုပြီးတော.
ကဲ ဟုတ်ပါပြီ အပြောလေး လျှော.ပြီး အလုပ်လေး စလိုက် ရအောင်
zip ဖိုင် ဖြည်ပါ ဘာညာ တော. မပြော တော.ဘူးနော်
1. install လုပ်
2. database ရရန် အတွက် Game ထဲ ၀င်ပါ။
(မှတ်ချက်။ ။ internet connection လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပြီး smule accountလုပ် ရန် လိုအပ်ပါက အကောင့်လုပ် ပေးပါ)
3.sd card ထဲကို magic.db ကို ထည်.ပါ
4. magic.db ကို ကူးပြီး data/data/com.smule.magicpiano/database/magic.db တွင် replace လုပ်လိုက်ပါ။
5. ကဲ mgaic piano ထဲ ၀င်ပြီး Bruno mars ကနေ ပြီးတော ဆရာ. ဆရာကြီး Mozart အထိ သီချင်းတွေကို ဆွဲ လိုက် ကြအောင် .....
(magic.db ကို replace မလုပ်မိ့ရင်တော. သီချင်းတွေကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ၀ယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်)
(ဒါကြောင့် root မလုပ်ထားတဲ. ဖုန်းတွေကတော. sample သီချင်း ၃ ပုဒ်ပဲ ရမှာပါ )
ရေးတဲ့အချိန် 3:06 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Myanmar Application Package(with 7days news)
Doc By Nyein Chan Ko Ko(Myanmar Mobile User Club)မွှေနှောက်ရရှိထားသော..မြန်မာ Free Application များစုစည်းတင်ပြအပ်ပါသည်။
၁၁.Hot News https://www.dropbox.com/s/getrev4dpmp4jzo/hotnews.apk?m
၁၈.Mobile Health Guide
၂၁. The Voice Daily
ရေးတဲ့အချိန် 2:39 PM3comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Ringtones, All In One 1.2
Ringtones, All In One 1.2's Description
Including 15 species and 1000+ songs.It fully deserves the terminator in the homogeneous app.
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 1mobile ဆိုဒ်ဟာလည်း google play လို ဖုန်းထဲကနေဆော့ဝဲ ယူလို့ရအောင်
လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် ဆော့ဝဲရဲ့ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလော့လင့်ကို ယူလို့မရတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဒီဆော့ဝဲကို သူရဲ့ မူရင်းဆိုဒ်မှာပဲသွားယူလိုက်တော့နော်။
ကွန်နက်ရှင်က မကောင်းတဲ့အတွက် တိုက်ရိုက်လင့်မပေးနိုင်တာပါ။
နောက်အချိန်ရရင် တိုက်ရိုက်လင့်ပေးနိုင်အောင် လုပ်ထားပါမယ်။
Download Ringtones, All In One 1.2
ရေးတဲ့အချိန် 1:19 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android အတွက် Viber ထက်ကောင်းသော AireTalk
Android အတွက် Viber ထက်ကောင်းသော AireTalk လေးကိုသုံးလို့ကောင်းလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
facebook အကောင့်နဲ့ register လုပ်လို့ရပါတယ်၊
voice massage sent
ရေးတဲ့အချိန် 1:35 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Huawei နှင့် အခြား viber မရသော ICS များ
ကဲ ဘောဘော တို.ရေ
viper မရသူများ အတွက် viper2.0.2.apk လေးပါ
ကျွန်တော. u8818 ICS မှာ တော. ကေတယ်
အခြားအခြား မရသူများရှိရင် comment ရေးပေးကြပါဗျာ
ဒါမှ မသိတဲ.သူတွေ သိရမှာပါ
(သင်တို. မသိလျှင် ကျွန်ုပ်ကိုမေးပါ
ကျွန်ုပ်မသိလျှင် သိသူကို ရအောင်ရှာမည်။ မသိသိအောင် ကြိုးစားမည်။)
စကားချပ်။ ။ ကျွန်ုပ် မသိသည်က များ၏။ ဟဲဟဲ
မှတ်ချက် ။။ သုံးလို. ရသော version အဟောင်းကို ပြန်တင်ထားတာ ဖြစ်ပြီး
One Click Myanmar font Changer and keyboard
ကျွန်တော် post တွေကိုတော. အခုမှ စ ရေးဖူးတာပါ ။
ဒါကြောင့် အမှားပါ ရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါ လို. အရင် ဆုံး တောင်းပန်ပါရစေဗျာ
ကဲ စလိုက် ကြရအောင်။
သိပြီးသူတွေလဲ သိမယ် လို.ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ်. မသိသေးသူတွေအတွက်တော. အသုံးဝင်ပါလိုက်မယ်။
အရင်ဆုံး ဖုန်းကို root လုပ်ထားဖို. လိုမယ်ဗျ။ root လုပ်နည်းတွေကိုတော. သက်ဆိုင်ရာ root လုပ်နည်းတွေမှာ ရှာပေးပါဗျာ။
ပြီးတော. USB Debugging ကို ON မယ်။
ထုံးစံ အတိုင်း ပဲ unknown source ကို ON မယ်။
adb driver install လုပ်ထားမယ်။
( Driver ကတော. ထူးထူးခြားခြား မရှာကြရပါဘူးနော.)
အရင်ဆုံး rar file ကို extract လုပ် ပါဗျာ။ အဆင်ပြေမယ်. နေရာမှာပေါ့နော.
ြီပီးရင် folder လေးကိုဖွင်.မယ် သယ်ရင်းရေ။
ဒါပြီရင် Myanmar font ဆို.တဲ. Bat file လေးကို double click ....
ဒါဆိုရင် command promp လေးပွင့်ပြီး apk တွေကို install လုပ်သွားပါမယ်ဗျာ။
ဒါနဲ.ပဲ ဒီpost ကို ပြီးလိုက်ရင် ကောင်းမလား ဟင်
ကျွန်တော ပြောချင်တဲ.နေရာကို မရောက်သေးပါဘူး။
အဓိကပြောချင်တဲ. အကြောင်းကတော. bat အကြောင်းပါ။
bat ပေါ်မှာ right click , Edit လုပ် လိုက်ပါ။
@echo မှာတော. cmd မှာ ပေါ်ချင်တဲ. စာလုံးလေးတွေ ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့် run လိုက်မယ်ဆို ရင် စာလုံးလေး တွေ စမြင်ရမှာပါဗျာ
ကတော. ခဏ ရပ်မယ် ဆိုတဲ. သဘောပါ
နောက်ထပ် run code တစ်ခုဖြစ်တဲ. adb install ဆိုတာက install လုပ်မှာဆိုတာကို ပြောတာပါ။
သူ. file တွေရဲ. location ဖြစ်တဲ. folder ထဲက frozenkeyboard.apk ကို install လုပ်သွားတာပါ။
install information ကို သေသေချာချာ ကြည်.လို. ရအောင် pause လုပ်ထားတာပါ။
အဲသည်မှာ နောက်ထပ် intstall လုပ် ချင်တဲ. apk လေးတွေ ရှိရင် adb install -\_XXXXXX.apk လို. ထပ်ပြင်ပေးလိုက်.ပေါ့နော.
မထည်.ချင်တဲ. apk တွေကိုတော. delete လုပ်လိုက်ပြီး ထည်.ချင်တဲ. apk ကိုတော. code ထပ်ရေးပေးလိုက်ပါဗျာ
Myanmar font မှ မဟုတ်ဘူး တစ်ခြား ဘယ် apk ကို မဆို ထည်.လို.ရပါတယ်
one click ဖြစ်တဲ. အတွက် packet နဲ. သွင်းတဲ. ဖုန်ဆိုင်တွေ အတွက် ပို အဆင်ပြေမယ်လို. ထင်ပါတယ်
မရှင်းလင်းဘူး ထင်ရင်တော. ... မေးလိုက်ပေါ့ဗျာ
သယ်ရင်းတို. တစ်ခုခု ပိုသိသွားရင် ကိုယ်. အတွက် အမြတ်ပါပဲ
ရေးတဲ့အချိန် 3:25 PM 1 comment: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
MMHubပရိတ် App သည် Android System သုံး Offline Application တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း App ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပရိတ်တော်များကို ဖတ်ရှု့ ရွတ်ဆိုနိုင်ခြင်း၊ ထို့သို့ရွတ်ဆိုရာတွင် လည်း Internet ချိတ်ဆက်ထားရန် မလိုအပ်ပဲ တရားတော်များကို အသံဖြင့် တစ်ပြိုင်နက် နာယူနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် Root မလုပ်ထားသော (သို) မြန်မာ Font မထည့်ထားသော Android System သုံး Phone များတွင်လည်း မြန်မာစာလုံးများကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။ (Sony Ericsson Phone များအပါအ၀င်)
အနည်းဆုံး လိုအပ်သော Android Version မှာ 1.6 ဖြစ်ပြီး 4.x.x အထိအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Download link (1) http://www.mediafire.com/?fc71xwf89c1wb93
Download link (2) >> https://www.dropbox.com/s/lf791t ... hub.MMHubPayate.apk
Download link (3) http://www.mediafire.com/download.php?fc71xwf89c1wb93
credit : MMHub
ရေးတဲ့အချိန် 3:23 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
GSM Prepaid Card Error Complaint phone no
ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် ရိုက်ထည့်ရာတွင် တခါတလေမှာ Invalid Card ပြတာတို့၊ တစ်သောင်းကျပ်မပြည့်ပဲ 8000ကျော်ပဲဝင်တာတို့
7000 ကျော်ပဲဝင်တာတို့အတွက် တိုက်ရိုက်မေးနိုင်ပါတယ်(ဖုန်းနံပါတ်ကတော့01-555476) ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့တော့ခေါ်ရမယ်နော်...နောက်ဆုံးသူတို့
မနေနိုင်ရင်ထကိုင်လိမ့်မယ်..ကျွန်တော် နှစ်ခါကြုံဖူးပါတယ်..The card is invalid ဆိုပြီးပြတယ် ဒါနဲ့ ဒီဖုန်းကိုဆက်လိုက်တယ်
01-555476 ...သူတို့က ငွေဖြည့်ကဒ်ရဲ့ serial no ကိုမေးပါတယ်...serial no နော် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး..
ကျွန်တော်အစဉ်ပြေသွားပါတယ်...ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က တလုံးမရတလုံးဆိုပြီး သူငယ်ချင်းဖုန်းမှာလည်း
ရိုက်ထည့်လိုက်တော့ သူငယ်ချင်းဖုန်းမှာ ၀င်သွားပါတယ်..သူတို့ကပြောပါတယ် အစ်ကိုကဒ်က ဘယ်နေ့၊ဘယ်အချိန်၊
ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်မှာဝင်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်...ဒါပေမယ့် ကျွန်တေ်ာတို့ ရိုက်ထဲ့တည့်အချိန်မှာတော့....ဖုန်းနှစ်လုံးစလုံး ဘာmassage မှတော့
တက်မလာပါဘူးခင်ဗျာ။ ဖုန်ငွေဖြည့်ကဒ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ လျှို့နံပါတ်ကိုခဲခြစ်တဲ့အခါမှာ လက်သဲလေးနဲ့ပဲခြစ်စေချင်ပါတယ်...ကားသော့တို့....စက်ဘီးသော့
တို့...သံပြားတို့နဲ့ တက်နိုင်ရင်မခြစ်ပါနဲ့ခင်ဗျာ...မတော်လို့လျှို့ဝှက်နံပါတ်ပျက်သွားခဲ့ရင် ...... serial no ပြောပြီးပြန်တောင်းလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ...
ရေးတဲ့အချိန် 3:08 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Mini Chaemeleon V1.0.0 for android
Android OS သုံးဖုန်းတွေအတွက် Mini Chameleon Live Wallpaper လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ချစ်စရာ Chameleon အကောင်လေးတွေရဲ့သက်ဝင်လှပမှုလေးတွေကို ဒီ Live Wallpaper လေးမှာခံစားရမှာပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 3:03 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
စက်ရုပ်အတွက်facebookကိုcomputerပုံအတိုင်းသုံးချင်ရင် BY Justin Blue (Myanmar Mobile Forum)
ရေးတဲ့အချိန် 2:40 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
AndroMedia Video Editor (Version 1.8)for Android
ကဲ… Android အတွက်ရော Video Editing App မရှိဘူးလားလို့မေးကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် AndroMediaVideo Editor ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့Androiddevice တွေကနေရိုက်ကူးထားတဲ့အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံလေးတွေကို Videoဖိုင်အဖြစ်ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် နောက်ခံတီးလုံးထည့်သွင်းခြင်း/မိမိအသံကိုRecording လုပ်ခြင်း/Transitions Effectsထည့်သွင်းခြင်းတို့ကိုလဲပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
6.3MB သာရှိတဲ့အတွက်ထည့်သွင်းထားသင့်တဲ့ App လေးပေါ့ဗျာ
GooglePlay မှာ 2.1 ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ရပြီး UVW မှာတောလွတ်လပ်လွယ်ကူစွာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
AndroMediaVideo Editor (Version 1.8) အားရယူရန်(MediafireLink)
ရေးတဲ့အချိန် 2:32 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Wifi Password သိမ်းနည်း
WifiPassword သိမ်းထားနည်း(UsingWifi Passwords)Password hack နည်းမဟုတ်ပါ။စက်မှာ ချိတ်ခဲ့သမျှ WifiPasswords တွေကို ကြည့်နည်း။ သိမ်းနည်းသာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချို့ဆိုင်တွေမှာ အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါဆိုင်ပိုင်ရှင်က Wifi Passwords ကိုသူ့ဖာသာ ရိုက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီအခါမျိုးမှာ password ကကိုသိချင်တဲ့အခါမှာ ဒီဆော့ဝဲလေးတွေကိုထည့်ထားရင် စက်မှာ သိမ်းပေးထားပါလိမ့်မယ်။
Text File အနေနဲ့ ဖြစ်လို့ စာလုံးတွေကိုတန်းမြင်ရပါတယ်။ Encrypt/ Decrypt မလိုပါဘူး။
For Android Devices(Rooted Devices Only)Android ဖုန်းအတွက်ကတော့အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ ဆော့ဝဲကိုDownload လုပ်ပြီးသွင်းပါ။ Superuser Request တောင်းရင်Allow ကိုနှိပ်ပါ။
မိမိစက်မှာ ချိတ်ဆက်ထားခဲ့သမျှNetwork တွေရဲ့ password တွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Wifi Passwords For Android >>>>>>http://www11.zippyshare.com/v/4555237/file.html
For IDevicesIdevices တွေအတွက်ကတော့ Cydia ကနေDownLoad လုပ်ပါ။ Cydia Repo>>>>>>>http://apt.thebigboss.org/repofiles/cydia/မရှိသေးရင် သွင်းပါ။
ပြီးရင် Search ကနေWifi passwords လို့ ရိုက်လိုက်ပါ။ WifiPasswords ဆိုတဲ့ list လေးကျလာရင်အ၀ါရောင်သော့ပုံလေးနဲ့ ဟာကို ရွေးပြီး Install လုပ်ပါ။
Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ screen ပေါ်မှာသော့ပုံလေးနဲ့ Wifi Passဆိုတာကို မြင်ရမှာပါ။ ၀င်ကြည့်လိုက်ရင်တော့စက်နဲ့ ချိတ်ခဲ့သမျှ WifiPasswords တွေကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 2:26 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
AudioManager or Hide It Pro v2.9.42(Full version) + No Icon Plugin for Android
Audio Manager or Hide It Pro ဆိုတဲ့အတိုင်းနှစ်မျိုးစလုံးရပါတယ်။ မိမိဖုန်းရဲ့ အသံစနစ်ကို ချိန်ညှိလို့ရသလို မိမိဖွက်ထားချင်တဲ့သီချင်းတွေ ရုပ်ရှင်တွေ စာအုပ်တွေ ဖိုင်တွေကိုလဲ ဖွက်ထားလို့ရပါသေးတယ်။
သူ့ရဲ့ app တည်ဆောက်ပုံလေးက အစမ်းလေးပါ။ ပုံမှန် appထဲဝင်လိုက်ရင် အသံချိန်ညှိဖို့ပဲတွေ့ရမှာပါ။ Audio Manager ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးကိုဖိထားတော့မှသာ password တောင်တဲ့ screen လေးပေါ်လာပြီး passwordရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့ ကိုယ်ဖွက်ထားတဲ့ဆီကိုရောက်ပါပြီ။
၁။ ဓာတ်ပုံ၊ ရုပ်ရှင်၊ စာအုပ် နဲ့ဖိုင်တွေကိုဖွက်လို့ရပါတယ်။
၂။ ပုံမှန်ဆို အသံချိန်ညှိတဲ့ app လို့ထင်အောင်ရုပ်ဖျက်ထားပါတယ်။
၃။ Plugin ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး All app or App drawer ကနေicon ကိုဖျောက်ထားလို့ရပါတယ်။
၄။ Escape pin ဆိုတဲ့ ထူးခြားတဲ့ function ပါပါတယ်။
Escape pin ဆိုတာက ဒုတိယ password ကိုပြောတာပါ။ အလုပ်လုပ်ပုံလေးကတော့Escape pin မှာ ကိုယ်က password တမျိုးထားထားလိုက်၊ သူငယ်ချင်းက Audio managerကိုတွေ့လို့ password တောင်းရင် အဲဒီ escape pin မှာ ထားထားတဲ့ passwordပေးလိုက်ရင် အထဲမှာ ဘာဆိုဘာမှ မရှိအောင်ရှင်းနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ သဘောက ကိုယ်ဘာမှဖွက်မထားတဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့။
နောက်တစ်ခုက နံပါတ် ၃ မှာပါတဲ့ plugin ပါ။ ဒီ pluginလေးထည့်ထားလိုက်ရင် all app or app drawer ကနေ audio manager လေးကပျောက်နေမှာပါ။သူ့ထဲကို ဝင်ချင်ရင်တော့ ဖုန်းခေါ်တဲ့ဆီကနေ password ရှေ့ က ## ခံပီ callနှိပ်လိုက်ရင် app ထဲကိုရောက်ပါတယ်။ ရှင်းအောင်ပြောရရင် password က 1234ဆိုပါတော့။ ဖုန်းခေါ်တဲ့ဆီကိုသွား ##1234 call ကိုနှိပ်၊ appရောက်၊ အဲလိုပါ။
Audio Manager or Hide It Pro အားရယူရန်
Hide It Pro- No icon plugin အားရယူရန်
ရေးတဲ့အချိန် 2:19 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ကျန်းမာရေးအတွက် မြန်မာ Android APK
ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလေ့လာ မေးမြန်း လို့ရတဲ့ မြန်မာ apk ပါ၊
*********************** Myanmar Mobile User Club မှ Ko Hein Khatရဲ့ပို့စ်ကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ် *************************
ဘာလိုလို ညာလိုလို တော့ မဟုတ်ပါ...ခင်ဗျား
appyet မှ ကလိထားသော apk လေးပါ
ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ရတာမို့ share ပေးခြင်းပါ ခင်ဗျား
ရေးတဲ့အချိန် 2:13 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Pattern Lock နဲ့ PIN lock တွေကိုဖြုတ်မယ်
Pattern Lock တို့ PIN Lock တို့ ကျသွားလို့ Factory Reset ပြန်လုပ်ရမှာကို စိုးရိမ်နေသူများအတွက်ပါ။ Gmail အကောင့်နဲ့လည်း အင်တာနက်ချိတ်လုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး နောက် Factory Reset ချစရာလည်းမလိုတော့ပါဘူး။ လိုတာကတော့ CWM Recovery လေး သွင်းထားဖို့ဘဲလိုတာ. အဲ့ဒါသွင်းထားရင် အားလုံး OK ပါပြီဗျာ။
လုပ်နည်းလေးက လွယ်ပါတယ်ဗျာ။ အခု ပိုစ့်မှာ တင်ထားတဲ့ Delete_Pattern_Lock_by_MyanmarMPxTeam.zip ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို ဒေါင်းပြီးတော့ SD-Card ထဲကိုထည့်ပါ။
ပြီးရင် ဖုန်းကို Restart လုပ်ပြီးတော့ Recovery Mode ထဲဝင်ပါ။
Recovery ထဲကနေပြီးတော့ Install from SD card >> Choose Zip From SD card ကနေတစ်ဆင့် Delete_Pattern_Lock_by_MyanmarMPxTeam.zip ဖိုင်ကိုရွေးပြီးတော့ Install လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားပြီဆိုရင် ဖုန်းကို Restart ပြန်ဆင်းပြီး မိမိ Pattern Lock တွေ မလိုဘဲ ဖုန်းက
ရေးတဲ့အချိန် 1:42 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android ဖုန်းတွေကို ဒါ နဲ့ ကလိပါ
USB Debugging turned on Android Phone
S-Off if you want to use the flashing stuff(For HTC)
ရေးတဲ့အချိန် 1:25 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Samsung Flash Tools ---Odin3 V3.07---NEW
ရေးတဲ့အချိန် 1:12 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ရေးတဲ့အချိန် 12:57 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
SMS Backup & Restore v5.81 for Android
SMS Backup & Restore v5.81 for Android အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Android ဖုန်းထဲက message တွေကို တခြားဖုန်းထဲကိုရွေ့ချင်လို့ Backup လုပ်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်
ကိုယ့်ရဲ့အရင်ဖုန်းတစ်လုံးထဲက message တွေကို ဖုန်းအသစ်ထဲကို restore လုပ်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးဖို့
SMS Backup & Restore v5.81 for Android ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Backup ရော restore ရော နှစ်မျိုးလုံးလုပ်နိုင်ပါတယ်
SMS Backup & Restore v5.81 ကိုဒီမှာဒေါင်းပါ http://www.2shared.com/file/YkIE ... store-Pro-v581.html
ရေးတဲ့အချိန် 12:45 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
HD ဂိမ်းကြီးတွေဆော့ဖို့ Game Booster
Model နည်းနည်းအောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ Android ဖုန်းတွေ အတွက် HD ဂိမ်းကြီးတွေဆော့လို့ မရလို့ စိတ်ညစ်နေသူတွေအတွက်
Game Boosterv1.2ကို သုံးပြီး HD ဂိမ်းကြီးတွေဆော့လို့ ရပြါ့ပီ
Game Boosterv1.2 ကိုဒီနေရာလေးမှာဒေါင်းပါ http://www7.zippyshare.com/v/39275766/file.html
ရေးတဲ့အချိန် 12:42 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android ဖုန်း googleaccount ဖျက်နည်း
Android ဖုန်းများကို foctory reset မလုပ်ဘဲ googleaccount ဖျက်နည်းပါ
၁။ မိမိ ဖုန်း က Root လုပ်ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်Root လုပ်ပြီးသားဖုန်း ကို Root explorer.apk ကို install လုပ်လိုက်ပါ
၂။ Root explorer ကိုဖွင့်ပါ superuser permision ကို allow လုပ်ပါ
Data/system/account.db ကို Delate လုပ်ပေးပါ
၃။ ပြီးလျှင် ဖုန်းကို power ပိတ်ပေးလိုက်ပါ 10 စက္ကန့် လောက်စောင့်ပြီးရင် ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ
Galaxy s2 ACE . GIO . Y များနဲ့Huawei U8818 . U8861 တို့ ကို စမ်းပြီးပါပြီအစဉ်ပြေပါတယ် အခြားဖုန်းများကို စမ်းပြီးကြရင်လဲ Reply လုပ်ပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 12:37 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဖုန်းကနေ Blog ရေးချင်သူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတစ်ခု
ဒီနည်းလေးကတော့ ဖုန်းထဲကနေ ဘလော့ကိုစာတင်ဖို့သင့်တော်တဲ့ နည်းလမ်းပါ
စာတွေ ၊ ကဗျာတွေ ၊ ပုံတွေ ၊ တင်ချင်တဲ့အခါမှာ ဖုန်းကနေ အမြန်တင်လို့ရေးလို့ 
ရတာပေါ့ ။ ဖုန်းကနေတင်ချင်ရင် အောက်ကလင့်ကို နှိပ်ပြီး ဆော့ဝဲထည့်လိုက်ပါ
အလွန်လွယ်ကူပါသည် ။ ဖုန်းနံပတ်ရိုက်ထည်တာနဲ့ဖုန်းထဲကို SMS ၀င်လာမယ်
၀င်လာတာကို နှိပ်လိုက် ဒေါင်းလုပ်ယူ အင်စတောလုပ်တာနဲ့ဖုန်းထဲကနေရေးဖို့ 
အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ.. ကွန်ပျုတာ တကူးတကဖွင့်စရာမလို့ ပဲ ဖလမ်းဖလမ်း.........။
ဒီလင့်မှာ နှိပ်ပြီးလုပ်ပါ - http://www.google.com/mobile/blogger/
ရေးတဲ့အချိန် 11:46 AM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Wifi Zone မှfacebook များကို android phone နှင့်ဟက...
Android ဖုန်းထဲကနေ ဘောပွဲGoal Scores တွေ ကြည့်မယ်....
ဖုန်းကနေ Blog ရေးချင်သူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေး...
Speed Up Your Internet For Android
တကမ္ဘာလုံးက ဖုန်းအချင်းချင်း ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ ဖုန်းခေ...
Android Phone အတွက်SMS message center နံပါတ် chang...
7Day News ဂျာနယ်၏ Android Mobile Application